Hafatra Krismasy araka ny Lioka 2.11: « Fa Mpamonjy no teraka ho anareo anio ao an-tanan’i Davida dia Kristy Tompo » – Zanaky ny Fiangonana Loterana Malagasy (ZFLM)
Hafatra Krismasy araka ny Lioka 2.11: « Fa Mpamonjy no teraka ho anareo anio ao an-tanan’i Davida dia Kristy Tompo »
Krismasy moa no ankalazaintsika. Andeha Ity Lioka 2:11 ity no ho raisintsika ho hafatra ho antsika amin’izany. « Fa Mpamonjy no teraka ho anareo anio ao an-tanan’i Davida dia Kristy Tompo » no nandikan’ny Baoboly Malagasy azy, fa raha ny teny fototra Grika kosa anefa no jerena dia tokony ho toy izao no azo andikana azy: « Fa TERAKA ho anareo anio ny Mpamonjy, dia Kristy Tompo, ao an-tananan’i Davida ». Izany hoe, ao amin’ny Baiboly Malagasy dia ny hoe « Mpamonjy » no iandohan’ny fehezanteny raha « TERAKA » kosa ao amin’ny fehezanteny Grika.
Raha araka ny teny fototra ary dia ny « fahaterahana » no tsindriana kokoa, izany hoe, ny fahasoavana entin’izany « fahaterahana » izany ho antsika na ny « teolojian’ny fahaterahana » no tiany ampitaina kokoa amintsika. Ahoana izany? Ny fiterahana dia ho fitohizan’ny asam-pamoronan’Andriamanitra. Jesosy dia nampiombona ny nofon’olombelona rehetra tao Aminy tamin’ny fahatongavany ho nofo, noho izany ny fiterahana Azy dia fiterahana na efa famoronany vaovao azy ireo ao Aminy koa. Voalaza eto amin’ity Lioka 2:11 ity fa: « Teraka ny Mpamonjy », izay azo anatsoahana hevitra toy izao koa hoe: « efa asa fanatanterahany ny famonjena ny fiterahana Azy ». Ny teny fototra izay nadika hoe « Famonjena » (soteria) dia izao no heviny: famonjena amin’ny loza izay mananontanona, fiarovana mba tsy ho tratran’ny faharavam-piainana, fitehirizana amin’ny fahasalamana tanteraka, fitehirizana amin’ny tena maha izy azy ilay olombelona ao anaty (inner being).
Voalazan’ny Soratra Masina fa ny OTA no efitra izay mampisaraka antsika amin’Andriamanitra, nahatonga antsika ho fahavalony izany (Rom 5:8-10). Ao amin’ny 2 Kor 5:15-21 sy Efes 2:11-22, dia mira-zotra foana ny asa fahariana vaovao sy ny ASA fampihavanan’ Andriamanitra. Izany hoe, Andriamanitra no mandray andraikitra amin’ny fampihavanana izao tontolo izao Aminy ka mba hahatonga ny olona ho havany indray dia izy no mitady ny fomba haharava ilay efitra na dia isika aza no nanangana izany ary anisan’ny fandravany izany efitra maha fahavalo antsika izany ny fahariana indray antsika ho zavaboahary salama sy vaovao indray teo amin’ny hazofijaliana izay efa natombony tao amin’ny fiterahan’i Maria an’i Jesosy. Izany hoe, ny faharian’Andriamanitra antsika ho vaovao no mampiverina antsika ho zavaboahary salama tanteraka, mahatonga ilay mahaizy azy ilay olombelona ao anatiny ho voatahiry tsara araka izay ikendren’Andriamanitra azy. Raha asam-paharian’Andriamanitra ary ny fiterahana dia izany koa no notanterahany tao amin’izay niterahana an’i Jesosy: ny Mpahary Izy ka tsy mila fahariana intsony tao amin’izay niterahana Azy fa mahary kosa izao tontolo izao mba hahavoavonjy azy araka ny namaritana ny hoe Famonjena teo ambony. (Mifamatotra ny Krismasy sy ny Paska).
Teraka ny Mpamonjy, tanteraka tao amin’ny fiterahana Azy ny famonjena antsika; izany no vaovao mahafaly izay lazain’ny Anjely ho an’izao tontolo izao eto. Mpiandry ondry miandry ny ondriny tamin’ny alina no nanambaran’ny Anjely izany vaovao mahafaly izany. Mpiandry ondry miatrika ny fiainany andavanandro ao anatin’ny aizina, i.e., miatrika ny adiny eo amin’ny fiainany dia ny adiny amin’ny fahafatesana izany, ny fahamaizinana izay nisy azy rahateo dia sarin’ny tontolon’izany fahafatesana izay nandrakotra azy izany. Ny voninahitr’Andriamanitra izay nandroaka izany aizina nandrakotra azy izay dia efa famindran’Andriamanitra azy ireo hiala tao anatin’izany tontolo misy azy izany ho amin’ny tontolon’ny fiainana araka an’Andriamanitra, i.e., fiainany sahady amin’ny famonjena izay tanteraka tao amin’ny fiterahana an’i Jesosy araka ny nanazavana azy teo ambony.
Ho antsika mpankalaza Krismasy dia mifaly isika satria efa tanteraka tao amin’ny fiterahana an’i Jesosy Kristy ny famonjena antsika. Mijoro ho vavolombelona handresy lahatra izao tontolo izao ihany koa, amin’ny alalan’ny efa maha zavaboahary vaovao antsika, ny fahamarinan’izany mba ho fitaomana azy ireo koa mba ho isan’izany. Izany indrindra no nataon’ireto mpiandry ondry ireto rehefa avy nandre sy nandray ho azy ireo izany vaovao mahafaly izany izy ireo.
Voninahitra anie ho an’Andriamanitra Ray sy Zanaka ary ny Fanahy Masina izay efa Azy hatrizay hatrizay ka ho mandrakizay. Amena
(Nosoratan’i Raiamandreny Pst.Dr. Rafalimanana Jean De Dieu, Mpampianatra Testamenta Vaovao ao @ Sekoly Ambony Loterana momba ny Teolojia na SALT Fianarantsoa)